AOL အဖြူရောင်စာရင်း - AOL နှင့်အတူအဖြူရောင်စာရင်းပြုလုပ်နည်း
အင်္ဂါနေ့, စက်တင်ဘာလ 11, 2007 အင်္ဂါနေ့, ဇူလိုင်လ 15, 2014 Douglas Karr
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ရဲ့တုန်းပဲအကြီးဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည် ISP က အီးမေးလ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးအလွန်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတာက AOL ဟာအွန်လိုင်းမှာတကယ်ထူးဆန်းတဲ့ Postmaster ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုပါ။ ဖောက်သည်တစ်ယောက်ကသူတို့ AOL အီးမေးလ်လိပ်စာတွေဆီအီးမေးလ်ပို့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြwhenနာရှိတယ်လို့ပြောတဲ့အခါငါသူတို့ကိုဆက်သွယ်ခဲ့တယ်။ သေချာတာပေါ့၊ ငါတို့လျှောက်လွှာ၏ IP လိပ်စာများကိုပိတ်ဆို့ထားကြောင်းသိလိုက်ရသည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် spammer တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုခုဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်အတော်အတန်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောအသံဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အီးမေးလ်များအားလုံးသည်အရောင်းအဝယ်သို့မဟုတ်ဖိတ်ကြားမှုသဘောသဘာဝရှိကြသည်။ စင်စစ်အားဖြင့်ဤလိပ်စာများမှမည်သည့်စျေးကွက်အီးမေးလ်မှထွက်ပေါ်လာခြင်းမရှိပါ။ သူငယ်ချင်းကောင်း၊ ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ဂုရုဂရက်ဂရက်ကိုရီးယပ်စ်ကိုကျွန်တော်ခေါ်ခဲ့တယ်၊ သူကကျွန်တော့်ကို AOL ရဲ့စာပို့လုလင်များနှင့်အဆက်အသွယ်အချက်အလက်တွေနဲ့ချက်ချင်းပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။ AOL Postmaster ဝက်ဘ်ဆိုက်။ သူတို့ကိုငါဖုန်းဆက်လိုက်သည်။ ပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့်အဖြူရောင်စာရင်းသို့ငါမည်သို့တက်လှမ်းနိုင်မည်ကိုသူတို့သိစေခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်၏အကြီးမားဆုံးပြproblemနာမှာကျွန်ုပ်တို့၏ Reverse DNS lookup disabled နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ system သည်မှားယွင်းသော AOL အီးမေးလ်အကောင့်များသို့ပေးပို့ခြင်းဖြစ်သည်။ Reverse DNS ဆိုသည်မှာ ISP တစ်ခုမှသင်၏ domain နှင့်ကုမ္ပဏီ၏အချက်အလက်များကို၎င်းမှလာသည့် IP လိပ်စာအားရှာဖွေရန်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုပိတ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် spammer တစ်ခုနှင့်တူသည်။ အလုံအလောက်မကောင်းတဲ့လိပ်စာများနဲ့အတူ AOL ကငါတို့ဘယ်သူလဲဆိုတာကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ငါတို့ဘယ်သူလဲဆိုတာမသိဘူး၊ သူတို့ကငါတို့ကိုပိတ်ဆို့လိုက်တယ်။ အဓိပ္ပာယ်ရှိ၏! သူတို့ကိုငါအပြစ်တင်လို့မရဘူး
Reverse DNS ကို enable လုပ်ပြီးနောက် AOL ကပိတ်ပင်လိုက်သည်။ ငါသည်လည်းအရောင်းအဖွဲ့နှင့်စကားပြောခဲ့ပြီး AOL အီးမေးလ်လိပ်စာဖြင့်သရုပ်ပြခြင်းကိုမလုပ်ရန်သူတို့ကိုပြောခဲ့သည် (သူတို့ကစာရိုက်ရန်အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်သည်မဟုတ်လော) ။ ပိတ်ပင်တားဆီးမှုကိုပယ်ဖျက်ပြီးပါကသင်က Postmaster site မှတဆင့် whitelisting လျှောက်ထားရန်သင့်အားခွင့်ပြုသည်။ ငါကအနည်းဆုံးအကြိမ်တစ်ဒါဇင်လောက်အသုံးချခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းတို့ရဲ့ဘဲတွေကမင်းမလုပ်နိုင်ခင်မှာတတန်းထဲရှိရမယ်ဆိုတာချက်ချင်းသိလိုက်တယ်။
ကျွန်ုပ်တို့အီးမေးလ်ပို့သော IP Address တစ်ခုချင်းစီတွင် Reverse DNS Lookup ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
အီးမေးလ်ပြissuesနာများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားစာရေးရန် AOL အတွက်တုန့်ပြန်သောအီးမေးလ်လိပ်စာကိုကျွန်ုပ်တို့ထူထောင်ရသည်။ အလွဲသုံးစားမှု @ ကိုပြုပြင်ပြီးပါပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်“ Errors-To” အတွက်စိတ်ကြိုက်အီးမေးလ်ခေါင်းစဉ်ကိုသတ်မှတ်ပေးနေဆဲဖြစ်သော်လည်းဤအရာသည်အစကောင်းပေပြီ။
ငါတို့ပိတ်ဆို့ခံရပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာမှာပဲစောင့်ရ ဦး မယ်။
သင်၏ဒိုမိန်းသည်သင်၏အဆက်အသွယ်နှင့်တုံ့ပြန်မှုကွင်းဆက်အီးမေးလ်လိပ်စာရှိဒိုမိန်းနှင့်ကိုက်ညီရမည်။ သင်လုပ်နိုင်သည် သင်၏ FBL အီးမေးလ်လိပ်စာကို AOL တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ.
သင့်တွင်မတူညီသော domains များရှိပါကတစ်ခုချင်းစီကိုလျှောက်ထားသင့်သည်။
သင်နှင့်အတူတင်လိုက်သောအီးမေးလ်လိပ်စာများကိုသေချာစွာစစ်ဆေးပါ။ သင်၏ whitelist တောင်းဆိုချက်ကိုသူတို့အလုပ်မလုပ်မီအတည်ပြုချက်လင့်ခ်ကိုနှိပ်ပါ။
နောက်ဆုံးအဆင့်မှာတုန့်ပြန်မှုကိုစောင့်ရန်ဖြစ်သည်။ သင်ငြင်းပယ်ခံရလျှင်သင် Postmasters ကိုခေါ်။ ရည်ညွှန်းအိုင်ဒီကိုပေးနိုင်ပါသည်။ ဤအရာသည်၎င်းတို့အားလျင်မြန်စွာရှာဖွေပြီးမှားယွင်းသောအရာကိုမြင်စေသည်။ ဒီအချိန်အနည်းငယ်လုပ်ဖို့အဆင်သင့်!
ဤအီးမေးလ်များကိုကျွန်ုပ်တို့မှထုတ်ယူနိုင်သည့်နေ့ကိုမျှော်လင့်နေပါသည် အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ ဒါကြောင့်ငါတို့ကစိုးရိမ်စရာမလိုတော့ဘူး။ သူတို့ရဲ့အရောင်းအ ၀ ယ်အီးမေးလ်စနစ်ကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်ကုမ္ပဏီ၏တိုးတက်မှုအချို့အတွက်ကျွန်ုပ်စောင့်မျှော်နေပါတယ်။ များများအမြန်လေလေ၊ သူတို့ပို့နိုင်တဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုတွေကိုပိုသုံးလေလေ၊
AOL မှာ Postmaster ၀ န်ဆောင်မှုကောင်းတွေရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ခေါင်းကိုက်တာကိုလုံး ၀ မခံချင်ခဲ့ဘူး။ မှတ်စုတစ်ခု၊ သင်ကသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကိုပိတ်ဆို့ထားတာလား၊ ငါတို့ကိုအဖြူရောင်စာရင်းသွင်းဖို့အခက်အခဲတွေရှိလား၊ မလုပ်ချင်ဘူးလားဆိုတာသင်သိချင်ရင်လား။ SPAM နှင့် ပတ်သက်၍ နိုးနိုးကြားကြားရှိသည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့်သူတို့၏ဖောက်သည်များကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်သည်။
AOL ကိုအဖြူရောင်စာရင်းသွင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့ထံပို့ရန်သမိုင်းကြောင်းမလုံလောက်မီအနည်းဆုံးကြိုးပမ်းခဲ့ရသည်။ သို့သော်သူတို့ကြိုးစားခဲ့သည်မှာ -
သင်၏ Whitelist တောင်းဆိုချက်ကိုအတည်ပြုနံပါတ် xxxxxxxx-xxxxxx အတည်ပြုပြီးပါပြီ။
သင်၏အီးမေးလ်များကိုပိတ်ဆို့ထားခြင်းရှိ / မရှိမသေချာ? တစ်ခုအသုံးချဖို့သေချာပါစေ Inbox နေရာချထားမှုစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးကိရိယာ ISP နှင့်သက်ဆိုင်သောပြissuesနာများကိုရှာဖွေ။ ဖြေရှင်းရန်။
Tags: 250okAOLaol လူမည်းစာရင်းနေပြည်တော်ဖြူဖြူကျော်သိန်းအီးမေးလ်ပိတ်ထားfblတုံ့ပြန်ချက်ကွင်းဆက်Inbox နေရာချထားမှုအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူisp ပါအမှိုက်စစ်စပမ်းspam တိုင်ကြားချက်spam filter ကို